Nagu saabsan | Zhejiang Shawei Digital Technology Co., Ltd.
Shawei Digital wuxuu ku yaalaa gobolka Zhejiang, waxaa la aasaasay 1998, wuxuu ku takhasusay Warbaahinta Gudaha iyo Dibadda. Shirkadda Shawei Digital waxay leedahay 11 laamood oo ku yaal Shiinaha oo dhan, ganacsigu wuxuu daboolayaa wax soo saarka, iibka, dhoofinta iyo daabacaadda.
Waxyaabaha asaasiga ah ee tartanku ka kooban yahay waa Taxanaha Iskoollada Iskudhafka ah, Taxanaha Santuuqa Iftiinka (Frontlit iyo Backlit), Taxanaha Qurxinta Darbiga iyo Muuqaalka Muuqaalka Sereis. Warbaahintu waxay tabineysaa min unug ilaa darbi ilaa sagxad, waxay ku haboon tahay Dye, Pigment, UV, HP Latex, Solvent iyo Eco-solvent.Shawei Digital waxay haysaa hal-abuurnimada dalabka, iyo sidoo kale alaabooyin cusub oo soo koraya. suuqa dhexdiisa, summadani waxay daboolaysaa warbaahinta daabacaadda qaab ballaaran oo Max Width waa 5M. Iyo sumadda MOYU sidoo kale waxay siisaa warbaahinta daabacaadda "PVC Bilaash" si looga jawaabo Ilaalinta Deegaanka Cagaaran.
Shawei Digital wuxuu bixin karaa cabir kala duwan oo laga soo qaaday Jumbol roll, mini roll ilaa go'yaal iyo cabirka A3 / 4. Isku day intii karaankeena ah si aad ula kulanto baahiyahaaga shakhsi ahaaneed. Wax soo saarku waa iib kulul ee Waqooyiga Ameerika, Koonfurta Ameerika, Yurub, koonfur bari Aasiya
Dhammaan tayada badeecadaha waxaa si dhab ah u xakameynaya nidaamkayaga QC, dhammaan walxaha waxaa lagu soo saaray dukaan shaqo oo aan lahayn boodh waxaanan leenahay R & D u gaar ah oo aan ku hubinno dhammaan horumarka. Waqtigaan, socodka QC wuxuu isticmaali doonaa qalab casri ah si loo hubiyo inline ka alaabta ceeriin ilaa alaabada ugu dambeysa.
Si aan u siino adeeg ka wanaagsan suuqa ou, waxaan had iyo jeer ka qeybgalnaa bandhigyada SGIA, APPP, SIGN CHINA, FESPA adduunka oo dhan, waxaan ka soo aruurineynaa jawaab celinta macaamiisheena oo aan u horumarineynaa waxyaabo cusub iyaga.
Wax soo saarkayagu waxay leeyihiin tayo wanaagsan iyo sumcad si aan u sii deyno xafiisyo fara badan iyo kuwa wax u qaybiya dalkeenna. In kabadan 1000 nooc oo alaabooyin ah ayaa noqon kara xulashooyinkaaga la midka ah.Khadka wax soo saarka ayaa daboolaya laga bilaabo gudaha ilaa banaanka.